Hlola iBahamas - World Tourism Portal
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeBahamas
Bukela ividiyo ekhuluma ngeBahamas
Hlola i-Bahamas noma i-Bahama Islands isiqhingi esihlanganisa iziqhingi ze-2,000 uma ufaka amakhokho, okuyiziqhingi ezincane ezakhiwe ezigodini zamakhorali.
Izwe lelo liqanjwe ngokusemthethweni i-The Commonwealth of The Bahamas. Igama elithi Bahamas livela eSpain futhi kusho ukuthi 'Amanzi angajulile'. Zitholakala kuLwandlekazi lwe-Atlantic. Hlola iBahamas njenge-wU-hen Christopher Columbus wafika okokuqala eWest Indies e1492, wafika esiqhingini iBahamian asibiza ngegama elithi San Salvador.
Abomdabu base-Arawak babehlala kulezi ziqhingi lapho UChristopher Columbus okokuqala ukusetha unyawo ezweni elisha eSan Salvador Island e1492. Ukuhlala kweziqhingi kwaseBrithani kwaqala e1647; iziqhingi zaba ikoloni e1783. Selokhu ithole inkululeko kwi-UK e-1973, iBahamas yathuthuka ngokuvakasha nangamabhange aphesheya kanye nokuphathwa kwezimali. Ngenxa yesimo sakhona, izwe liyindawo enkulu yokudluliselwa kwezidakamizwa ezingekho emthethweni, ikakhulukazi ukuthunyelwa e-US, futhi indawo yalo isetshenziselwa ukuthunyelwa kwabantu abangena ngokungemthetho eMelika. Ngenxa yokuthi izwe alikhokhi ntela, laziwa njengendawo okuya kuyo ibhizinisi, futhi izinkampani zingaba namagatsha lapha.
Ulimi olusemthethweni olukhulunywa eBahamas isiNgisi, noma kunjalo lolulimi nolulimi kunzima kakhulu kubantu baseNtshonalanga nabaseYurophu ukuba baqonde, ikakhulukazi eziqhingini “ezingaphandle.”
Abantu banobungane futhi banenkolo ngokwendlela umuntu angayilindela: iBahamas inesilinganiso esiphakeme kakhulu samasonto ngalinye emhlabeni, kanti amaBaptist abe yiqembu elilodwa elikhulu kunawo wonke
Umcimbi omkhulu kunazo zonke kukhalenda laseBahami 'Junkanoo', umbukiso wasemgwaqweni owabanjwa nge-Boxing Day (26 Disemba) kanye noSuku loNyaka oMusha (i-1 Januwari). Amaqembu aseJunkanoo 'ashesha' emigwaqweni yamadolobha, ikakhulukazi Nassau, egqoke izingubo ezigqamile kodwa ezilahlayo zamaphepha e-crepe futhi edlala umculo oyingqayizivele weJunkanoo, ohlanganisa izingoma zase-Afrika ngethusi elikhulu kanye nokubopha izinkomo, uzihlanganise ndawonye ngendondo ezungeza i-cacophony kodwa edansa ngokweqile. Izingubo, ezenziwa ekuqaleni konyaka, zichithwa emigwaqweni njengoba iphathi liphela futhi lenze isikhumbuzo esikhululekile samahhala sokuletha ekhaya!
Kuningi izinhlobo zomculo waziwa ngesiko laseBahamian kepha izinhlobo ezine zomculo ezivame kakhulu
Umculo weBahamas uhlotshaniswa ngokuyinhloko ne-junkanoo. Amabala neminye imikhosi kugujela umcimbi. Amaqembu afana ne-Baha Men, Ronnie Butler neKirkland Bodie athole ukuthandwa okukhulu eJapan, e-United States nakwezinye izindawo.
ICalypso isitayela somculo esiqhamuka e-Afrika naseCaribbean kodwa sisuka eTrinidad naseTobago. Le ndlela yomculo isabalale ezingxenyeni eziningi zeCaribbean, futhi ikakhulukazi iBahamas.
I-Soca uhlobo lomculo olubandakanya ukudansa nolusuka emculweni we-calypso. Ekuqaleni yayihlanganisa umsindo we-melodic onesigqi se-calypso nomsindo oqinile womculo we-chutney. Umculo weSoca ukhule eminyakeni yokugcina ye-20 ikakhulukazi ngabaculi abavela kuma-Anglophone ahlukahlukene I-Caribbean amazwe afaka iTrinidad, iGuyana, iSanta Vincent kanye namaGrenadines, iBarbados, iGrenada, iSanta Lucia, i-Antigua neBarbuda, iziqhingi zase-United States, e-Bahamas, eDominica, eStitu Kitts naseNevis, Jamaica kanye neBelize.
Umculo we-rake and scrape uvela emasikweni omculo weTurks and Caicos Islands, futhi ubonakala ngokusetshenziswa kwesarha njengethuluzi eliyinhloko. Yalethwa ngabokufika kulezo ziqhingi ukusuka kuma-1920s kuya kuma-1940s, ahlala eCat Island nakwezinye izindawo. I-Rake neScrape ngokwesiko kusetshenziselwa ukuhambisana neBahamian Quadrille kanye nesithende-uzwane konke okuhlanganisa izingxube zezingxube zokuqala zase-Afrika naseYurophu. Iningi lalaba bantu baseTurks naseCaicos Islanders baba abanye babaculi abadumile eBahamas. Abaningi bagcina sebebuyele emazweni abo, beza ne-junkanoo. ITurks neCaicos manje sekuyikhaya lesibili le-junkanoo.
Iziqhingi zasenyakatho zingaphansi komhlaba. Ihlobo liyashisa futhi lina, kanti ubusika buwomile futhi bufudumele. Iziqhingi zaseningizimu zithola isimo sezulu esishisayo, esinokufudumala okuzinzile unyaka wonke.
Izilwane zasendle eBahamas iqukethe izinhlobo ezahlukahlukene. Izinhlobo eziningi zohlobo lwemikhwebu zingatholakala emabhishi. IHermit neCardisoma guanhumi zimbili zezindawo zokudonswa phansi komhlaba okufanele ziphawulwe njalo kulesi siqhingi. Amahhashi asendle e-Abaco adumile e-The Bahamas.
Ngesikhathi sohambo lweBahamas, izivakashi zingathola ezinye izinhlobo ezahlukahlukene kufaka phakathi iBahamas Hutia, amasele amaningi, amatshe amdaka, iminenke efana neCerion, icicada, inhlanzi yomhume eyimpumputhe, izintuthwane nezirhubuluzayo.
I-Bahamas Wildlife ifaka izinhlobonhlobo zezinyoni ezimangalisayo. Ama-parrots kanye namajuba yizinyoni ezimbili ezivame kakhulu nezithandwayo ezitholakala eBahamas.
IBahamas iyikhaya lezimpilo eziningi zasemanzini. Oshaka, ama-manatee, amahlengethwa, ama-frogfish, ama-angelfish, ama-starfish kanye namafudu angabukwa emanzini azungeze i-Bahamas. Ngaphandle kwezinhlobo eziningi zezinhlanzi, izivakashi zingabona izinhlobo eziningana zezikelemu nazo.
Iningi labantu bezwe lihlala kulo Nassau e-Providence Island nasezingeni elincane, ngaphakathi nasezindaweni ezizungezile I-Freeport indawo on Grand Bahama. Zonke ezinye iziqhingi zaziwa njenge-Out Islands noma njenge-Family Islands ngoba abantu abaningi eNassau naseFreeport banemindeni e-Out Islands.
Izikhumulo zezindiza ezinkulu kunazo zonke eBahamas zisenhloko-dolobha iNassau, eNew Providence, nase I-Freeport, ku Grand Bahama. Izikhumulo zezindiza ezincane zihlakazekile phakathi kwezinye iziqhingi.
AbaseBahamas bayindawo ethandwayo yokuthumela imikhumbi ehamba ngomkhumbi eCaribbean. Inhlokodolobha, iNassau, esiFundazweni saseNew Providence ingelinye lamachweba omatasa kakhulu omkhumbi emhlabeni, futhi isetshenziswa kahle yimikhumbi evela eFlorida. I-Freeport ivuliwe Grand Bahama Isiqhingi siyindawo ekhulayo nendawo.
Ngenkathi isiNgisi silulimi olusemthethweni lwamaBahamas, iningi labantu likhuluma isiBahamian Dialect. Kunokwehluka okuncane kwesifunda kusuka esiqhingini kuya esiqeshini ngokubiza amagama.
Amabhishi aseBahamas ayisihego ngokwawo kodwa iBahamas iyaziwa ngokuba nezimpawu zomhlaba. Ezinye izindawo eziveziwe zibandakanya i-Pompey Museum of Slavery and Emancipation (eyayaziwa ngokuthi i-Vendue House) neParadise Island enezinto eziningi eziziheha yona. Kukhona Amabhothi kanye nezigodlo kulo lonke idolobha laseNassau futhi zivulekile zonke izinsuku ngenjabulo yakho yokubuka. Futhi kunemibukiso eminingana yobuciko efana neNational Art Gallery yaseBahamas, Central Bank (Lobby), National Treasure building (Lobby), D'Aguliar Art foundation nabanye abaningi lapho ungabuka khona imisebenzi yobuciko yaseBahamian yasekuqaleni.
Thatha uhambo lwe-distillery eJohn Watlings noma zama iTra Bahamas Food Tours lapho ungadlela khona i-hop futhi ujabulele ukudla okuyikho kweBahamian okusemandleni. Noma ube ngumculi wosuku futhi ungene ku-Earth & Fire Pottery Studio bese udala owakho umsebenzi wobuciko lapho noma zama i-Bahama Hand Prints Studio futhi ufunde ubuciko obuhlukile ekwenzeni amaphrinta wethu we-Androsia kazwelonke nemiklamo.
Amanzi ayingxenye enkulu yeBahamas futhi ilungele imidlalo yezamanzi, ukugibela amakhayithi, ukugibela izikebhe, ukudoba izinyoni, ukudoba okujulile, ukudoba amathambo, ukugijima kwamagagasi, ukuvakasha kwesikebhe esiqhingini, uhambo olude lwasolwandle kanye nokuhlangana koshaka.
Eminye imisebenzi ifaka uhambo lokuhamba ngesikebhe njengeBooze Cruise noma iFlying Cloud, ukuzama inhlanhla yakho eCasino eParadise Island Atlantis Casino, eCrystal Palace Casino eCable Beach Strip, noma eBimini. Kunokhenketho oluningi lwe-eco / kwemvelo kanye namathuba okwazi impilo yasendle eseduze neningi lemisebenzi yezingane e-Atlantis, Adastra Gardens noma eDolphin Encounters eBlue Lagoon Island.
Kwabathandi bemvelo kunama-Eco Adventures ambalwa afana nemvelo ehamba e-Clifton Heritage Site kanye nokuvakasha okuhlukahlukene kweCave Nassau nakwezinye iziqhingi eziningi. Kukhona futhi igalofu e-Ocean Club eParadise Island noma eSandals Emerald Bay e-Exuma.
Uma ukhetha ukuhlola ngejubane lakho ungakhetha ukuqasha imoto bese uvakashela iziqhingi wedwa. Uma eNassau abaningi bakhetha ukuvakashela iNational Art Gallery, iMnyuziyamu wePirates, nezindawo ezimbalwa zomlando ezifana neFort Charlotte noma iFort Montague nje ukubala abambalwa. Uma ufuna isenzo esithe xaxa samanzi ungabhalisela i- "Booze Cruise", i-Flying Cloud tour noma ubhukhe uhambo oluya eRose noma eBlue Lagoon Island futhi ujabulele ukubhukuda, i-beach pic nick's noma uhlangane neDolphins enobungani.
Kukhona neminye imikhosi eminingi eqhubeka unyaka wonke eBahamas ikakhulukazi ngesikhathi sasehlobo njengeGoombay (Nassau), uphayinaphu (Eleuthera) kanye ne-Rack n 'Scrap (Cat Island) Festivals. Okokugcina ungabuka ukubonakala kokusebenza kweJunkanoo ngesikhathi sasehlobo futhi.
Izingqungquthela ze-Bahamas Dolphin. Alikho iholidi laseBahamas elizoqedwa ngaphandle kokuhlangana namahlengethwa, futhi ukubhuka isipiliyoni samahlengethwa ngeBahamas Dolphin Encounters kuyindlela eqinisekile yokuqiniseka ukuthi leli phupho liyagcwaliseka kuwe nomndeni wakho. Kungumqondo omuhle ukusukuma usondelene nomuntu uqobo ngamahlengethwa anobungani, futhi ngisho naseqhingini elingasasebenzi noma olwandle oluvulekile.
Bonke abathengisi abakhulu abajwayelekile baseCaribbean batholakala eNassau futhi I-Freeport, kufaka phakathi izimbali zokuzimela zodwa zemikhiqizo yokunethezeka yamazwe omhlaba kanye nabathengisi besifunda baseCaribbean abasebenza ngokukhethekile ukumela izinhlobo eziningi.
Kuncane kakhulu okwenziwe eBahamas, kepha ezinye izimpahla zokunethezeka zingathengwa ngemali ebunjiwe, noma kufanele wenze ucwaningo lwakho kusenesikhathi futhi uqiniseke ukuthi ungakuthumela ngokufanele noma yikuphi ukuthenga okungaphansi kwemvume yezwe lakho lezwe.
Njengoba ungalindela esizweni esisesiqhingini, ukudla kwasolwandle kudume kakhulu. Isitsha sikazwelonke si-conch, uhlobo lwe-mollusc, okufakwe ngokujulile okuthosiwe (“okuqhekekile”) noma okuluhlaza okusonziwe kalamula, futhi njengakwezinye izindawo eziseCaribbean, ukuhambisana okufana nokwedlule kungubhontshisi nelayisi. I-crch ephukile ibukeka futhi inambitha okufana nenhlekelele ethosiwe, kepha inyama ye-conch iqinile kune-squid futhi inephunga elinamandla.
Njengeziqhingi eziningi esifundeni, iBahamas ayikwazi ukukhulisa iningi lezithelo nemifino futhi ikwazi ukufuya amandla okufuya inkukhu ukukhulisa inkukhu noma izinkomo ezikhungweni zezimboni. Ngenxa yalokhu, zonke lezo zinto kufanele zingeniswe ezivela ezweni elikhulu, kungaba nge-air cargo noma emigomeni yesitsha efrijini. Lindela noma isiphi isitsha esuselwa ngokuyinhloko ezintweni ezingenisiwe (ngokuchasene nezinto zasendaweni ezifana ne-conch) ukubiza okungenani okuphindwe kabili kunalezo ezilingana nayo noma ngaphezulu.
Kukhona okuhlushwa ikhasimende eliseduze. Kulindelwe ukuthi ulinde ithuba lakho ngesineke. Ezitolo zokudlela ezisheshayo iseva izonakekela ikhasimende lokuqala kuphela kuze kube yilapho sebephumile endaweni yenkonzo. Ungalindeli ukushesha ngisho nasendaweni yokudla esheshayo.
Ukusebenza eBahamas kwenzeka ngesivinini esikhululekile. Abahambi bangalindela ijubane lokuzijabulisa ekudleni kwabo. Lindela inhlonipho, uma ihamba kancane, insizakalo kuzikhungo eziningi.
I-"Goombay Punch" yi-soda yendawo. Inephunga lephayinaphu futhi yilokho abantu bendawo bakubiza ngokuthi “Okumnandi” okushukela kuqhathaniswa ne-cola. Kuthengiswa ngamathini kuzo zonke izitolo zokudla futhi kutholakala cishe kuwo wonke ama-eatery aseBahamian.
Iziphuzo zohlobo lwe-malt ezingekho utshwala nazo zithandwa kakhulu. Uhlobo lokuqala lokukhetha i-Vita-Malt.
I-Kalik ubhiya kazwelonke weBahamas futhi ihlala ihanjiswa ezindaweni zokungcebeleka “ezibandakanya konke”. Kunezinhlobo ezintathu ezihlukile: “I-Kalik ejwayelekile” ene-4% utshwala nokunambitheka okubushelelezi, i- “Kalik Light” okuvame ukuqhathaniswa neBudweiser ilondolo elikhanyayo elinikeza ukunambitheka okuhle okufana ne-kalik ejwayelekile kepha okuqukethwe okuncane kotshwala namakhalori angaphansi, i- "Kalik Gold" ine-7% utshwala, yize inamandla amakhulu ukunambitha, okunikeza umuzwa owengeziwe walesi siqhingi. I-Guinness nayo ithandwa kakhulu.
Ubhiya ongenisiwe ungabiza kakhulu emahhotela kepha awuthengwa ngamanani amakhulu emigoqweni nasezitolo zotshwala. Amacala obhiya ayatholakala ezitolo ezahlukahlukene zaseDuty Free.
Isikhathi sokuphuza yi-18, noma kunjalo sisebenza ngokuqinile futhi ukuphuza kwentsha kuvamile.
I-Bahamas ine-rum yayo yendabuko engayinikeza ngezinhlobo ezahlukahlukene ezibandakanya iRon Ricardo rum, u-Ole Nassau Rum kanye noMlilo odume kakhulu eHole Rum, kanti lo mlilo osesigodini rum uyigolide ngombala unebhodlela elihlukile kakhulu ilebula okuqinisekile ukuthi liyingcezu yengxoxo enhle ekhaya. Izimbangi zeRon Ricardo nezimbangi zika-Ole Nassau zombili ziza nokunambitheka okuhlukahlukene. URon Ricardo unesigqoko sikakhukhunathi esihamba phambili esisetshenziselwa ukwenza isiqhingi esithandwa kangaka esiqhingini esithi “The Bahama Mamma”. Okunye ukunambitheka kufaka imango, uphayinaphu nebhanana, i-rum yegolide, i-rum elula nokukhanya kwe-151 rum. Ole Nassau i-rum futhi inikeza zonke ukunambitheka kulokho kweRon Ricardo. Ilebuli yayo yamabhodlela nayo ihlukile kakhulu futhi inobuciko eveza umkhumbi we-pirate ogudla neziqhingi zaseBahama.
Ezokuvakasha ziyimboni enkulu elandelwa yibhange. Amaphesenti we-50 we-GDP kazwelonke akhiqizwa ezokuvakasha.
Abantu baseBahami banemvelo enhle kepha abahlupheka ngenkani.
Hlola iBahamas futhi ngeke uzisole.